Забур 142 CARS - Nnwom 142 ASCB
Dawid deɛ. Ɛberɛ a na ɔwɔ ɔbodan mu no. Mpaeɛbɔ.
1Meteam mesu frɛ Awurade;
me ma me nne so su frɛ Awurade sɛ ɔnhunu me mmɔbɔ.
2Mehwie mʼahiasɛm megu nʼanim;
3Sɛ me ɔkra tɔ baha wɔ me mu a,
ɛyɛ wo na wonim mʼakwan.
Ɛkwan a menam so no
nnipa asum me afidie wɔ so.
4Hwɛ me nifa so na hunu sɛ;
menni dwanekɔbea bi;
5Ao Awurade, mesu mefrɛ wo;
mese, “Wone me dwanekɔbea,
me kyɛfa wɔ ateasefoɔ asase so.”
na mewɔ ahohia kɛseɛ mu;
gye me firi mʼataafoɔ nsam,
ɛfiri sɛ wɔn ho yɛ den sene me.
7Yi me firi me nneduadan mu,
Afei teneneefoɔ bɛtwa me ho ahyia
ɛsiane wo papa a woayɛ me enti.
ASCB : Nnwom 142